Ny backup Thunderbird sy Firefox eo anelanelan'ny Windows sy Linux | Avy amin'ny Linux
Indraindray amin'ny fifindra-monina orinasa iray, ny zava-dehibe indrindra dia ny fifindra-monina, mendrika ny fihenam-bidy, ny fampahalalana ary ny kaonty mailaky ny mpampiasa satria tokony hitandrina tsara ianao mba tsy hahavery zavatra amin'ny tetezamita. Izany no antony mahatonga ahy hanana ny fepetra alohan'ny hamindrana mpiasa iray avy amin'ny Windows mankany Linux na ny mifamadika amin'izany, ny zavatra voalohany dia ny «mampifanaraka» ny mpampiasa hampiasa fitaovana maro karazana ary izany dia ahafahantsika mivezivezy ny angon-drakitra avy amin'ny Operating System iray mankany amin'ny iray hafa mora foana.
Azontsika atao ny manome ohatra ny fampiharana multiplatform: Thunderbird, Firefox, LibreOffice, Inkscape, GIMP, ary fitaovana maro hafa izay azo ampiasaina amin'ny Operating Systems. Amin'ity tranga ity, ny hasehoko anao dia ny fomba fitehirizana sy famerenana amin'ny laoniny ny mombamomba an'i Thunderbird sy Firefox amin'ny Windows sy Linux, ary na dia toa adala aza izany dia tsy mamparary mihitsy ny mampiseho ny fizotrany raha mila izany ny olona iray.
1 Aiza ny fampirimana Thunderbird sy Firefox?
1.1 Ao amin'ny GNU / Linux
1.2 Amin'ny varavarankely
2 Backup avy amin'ny Linux mankany Windows
3 Backup avy amin'ny Windows mankany Linux
Aiza ny fampirimana Thunderbird sy Firefox?
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika dia ny toerana misy ireo làlan-drakitra Thunderbird y Firefox tahirizo ny toe-javatra napetraky ny mpampiasa.
Ao amin'ny GNU / Linux
Ny lahatahiry ho an'ireo rindranasa ireo dia hita ao amin'ny / trano an'ny mpampiasa, miaraka amin'ny anarana .thunderbird (na .icedove amin'ny Debian) ho an'ny mpanjifa mailaka, ary .mozilla ho an'ny navigateur, na dia mazava ho azy fa takona izy ireo. Ankehitriny rehefa mieritreritra an'izany aho, ny folder Thunderbird dia tokony ho ao anatiny koa .mozilla, satria vokatr'ilay orinasa iray ihany io, na izany aza.
Amin'ny tranga Windows, fantatray fa ny configurations an'ny mpampiasa dia TSY voatahiry ao amin'ny fizarazarana data, fa ao amin'ny fizarazaran'ireo System. Amin'ny tranga asehontsika anio, dia ao amin'ny:
Backup avy amin'ny Linux mankany Windows
Eritrereto avy eo fa manana solosaina miaraka amin'ny GNU / Linux izahay ary mpampiasa iray izay mampiasa Thunderbird sy Firefox. Ny sisa ataontsika dia ny mamonjy ireo lahatahiry ao an-tranontsika, ireo nolazaiko tetsy ambony ireo ary adikao amin'ny Windows ao amin'ilay lalana:
Ary izay ihany.
Manoro hevitra anao ny tsy hanokafanao ny Firefox na Thunderbird alohan'ny hanaovanao ilay kopia, mba tsy hamoronana profil hafa ianao
Backup avy amin'ny Windows mankany Linux
Eny, araka ny azonao an-tsaina, ny fizotrany mifamadika dia mitovy fa ny maka tahaka izay rehetra ao anatiny
Ho an'ny / trano. Ary dia izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ny backup Thunderbird sy Firefox eo anelanelan'ny Windows sy Linux
Haingana kokoa hahitanao ny toerana misy ny mombamomba anao izay hamerenana. Manoratra momba ny: fanohanana ao amin'ny bara adiresy izahay na koa mahazo avy amin'ny lalan'ny bokotra menio -> Fanampiana (?) -> Fampahalalana hamahana olana -> Lisitry ny lisitry ny profil -> bokotra "Open Directory" ary ao no maka tahaka na manolo ny mombamomba. Ny zava-drehetra dia ho voatazona afa-tsy ny plugins.
Araka ny nampitandreman'ilay lahatsoratra, ny tsara indrindra dia ny manamboatra ireo backups ao anaty browser browser misy Thunderbird na Firefox mihidy.
Toro tsara .. saika "misy fomba hafa" foana hanaovana zavatra 😉
Bikooo2 dia hoy izy:
Vao haingana aho no nifindra avy tany Windows nankany Opensuse, mbola avelako araka ny faniriako ary hamindra ilay backup ho an'ilay vaovao, saingy azoko atao ny milaza fa mampiasa io fomba io aho, ary ho ahy dia tsara kokoa noho ilay naroson'i @Noctuido, satria Izaho dia nijanona niaraka tamin'ny fikirakirako sy ny add-ons mitovy amin'ny ao amin'ny Windows ary tsy mila mikasika na inona na inona aho.
Valio amin'i Bikooo2
Momba ny fihatsarambelatsihy ao anatin'ny tontolon'ny GNU / Linux